Yini indawo kuwufanele ngokuvakashela, eza eMoscow?
Moscow - idolobha elihle, okuyinto edonsela inani elikhulu labantu. Kunezinto eziningi izindawo eziningi ezithakazelisayo ukuthi bayakufanelekela ukunakwa zezivakashi. Uma uya ukuya enhlokodolobha isiRashiya, into yokuqala kufanele sicabangele lapho uhlala khona. Indlu iqashwe eMoscow ukuqasha ngokuphazima kweso. Ungakwazi yini ukuthola indawo yokuhlala enjalo ku emabhodini ku-intanethi noma uxhumane agency ezifanele. Ngomqondo onabile kungenzeka ukuba axazulule kanye nehhotela, nakuba amanani amahhotela eMoscow abhekwa ngokweqile.
Yiqiniso, evakashele enhloko-dolobha ukuthi aphakamise ukuthi ukuhlola ezikhangayo esemqoka yedolobha. Kungenzeka ukuthi ngeke kuthathe amahora amaningi bebuka indawo, ngokuvakashela okuzokwenza bafunde amaqiniso amaningi ezithakazelisayo ngomlando edolobheni. Kodwa kukhona inketho elikuvumela ukuba bazi izinto eMoscow, ngakolunye uhlangothi. Ningahlala isikhungo esingokomlando edolobheni, futhi kumelwe azungezwe nezikhumbuzo. Amakamelo okulala awabange eMoscow kungaba zisuswe, isibonelo, endaweni Chinatown.
China Town - lena ingenye yezindawo endala kakhulu yenhloko-dolobha. Itholakala ephakathi koMfula eMoscow, ezibiyele kanye Okhotny Ryad.
Ngisho nangekhulu nanye, kwabonakala imizana kuqala. Futhi ngemva kweminyaka emithathu lapha ixazululwe ezohwebo kanye izikebhe namadlelo. Ngu ngekhulu leshumi nesithupha kwemiphakathi yasemadolobheni wakhala le boyars nabefundisi. Ngesikhathi esifanayo, futhi igama "China Town", lisuselwa ezisetshenziswa ekwakhiweni izinqaba - "umkhoma".
Ngekhulu leshumi nesithupha endaweni seliya hlala ebalulekile ekuphileni kwama-edolobheni, Ukuphrinta Indlu yakhiwa lapha, futhi kamuva - Mint. Futhi ekupheleni kwekhulu lesikhombisa, kwaba lapha owavula Slavic-Greek-Latin Academy - ngowokuqala semfundo ephakeme kuleli zwe.
China Town lavuselelwa emva umlilo 1812, futhi manje-ke akuyona isakhiwo okusikhumbuza izikhathi kwekhulu nesikhombisa. Ngokuyinhloko, a yesimanje China-edolobheni ukuphila kubonakala yeshumi nesishiyagalolunye kanye eminyaka lwamashumi amabili. Ngalesi sikhathi, le ndawo yaba isikhungo zebhizinisi eMoscow, lokhu lapho inani elikhulu izinkampani zokuhweba kanye namabhange. Ngaphandle kwalokho, kwaba maphakathi incwadi ukuhweba, itholakala esitolo sezincwadi leli dolobha elikhulu futhi ezitolo ezincane incwadi.
ungavakashela Red Square, iminyuziyamu ethakazelisayo, uma uthanda. Ngaphezu kwalokho, inani elikhulu kwamasonto zezindela basuke bagxila eMoscow. Ngakho ungenawo miss - usuku uzokhanya igcwaliswe.
Ukuphathwa pancreatitis amakhambi abantu: singakunqoba kanjani isifo